Efa filohan’ny Federasiona malagasy ny Rugby i Andriantsilavo Zo Christian. Efa filoha mpitarika Asa sosialy maro teto Antananarivo. Efa Tale naharitra tao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Ireo mahalala azy dia mihevitra fa mamaly ny filana amin’ny fitantanana vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny asa aman’andraikitra nosahanin’i Andriantsilavo Zo Christian. Maro no manosika ny hirotsahany ho kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra noho ny traikefa ananany sy ny fiofanana norantoviny teto an-toerana sy tany ivelany.